Shona 22-06-06 - The Zimbabwean
BULAWAYO - Zana remadzimai eWOZA rakasungwa kuInsisa mushure mekunge madzimai acho aratidzira murunyararo kutsutsumwa kwawo nekukwidzwa kwemari dzechikoro uye kudzingwa kwevana vanenge vasina mari yacho.
Mari dzechikoro dz
akakwidzwa kubva pa$500,000 kuenda pa$5million. Nhengo dzeWOZA dzekumaruwa eInsiza dzakaratidzira pamahofisi ebazi redzidzo muguta reFilabusi vachisheedzera kodzero yedzidzo dzevana vavo.
Vakange vari zana nemakumi matanhatu (160), uye pane ratidziro yekuti vachasungwa vachatopfuura zana nokuti mamwe madzimai akanzwa kuti vamwe vavo vakasungwa achatoendawo kunozvipa kumapurisa kuti vamire pamwe chete nevamwe vavo.
Magweta ezvekodzero eZimbabwe Lawyers for Human Rights (ZLHR) ari kuvamiririra.
Pavakapedza kuratidzira madzimai eWOZA akapfuura nepakamba yemapurisa achienda kudzimba dzavo. Izvi ndizvo zvinenge zvakazoita kuti mapurisa azive zvanga zvichiitika, ndokutanga kuvasunga. Ivo havana kumbopikisa, uye vanhu vakawanda vakabuda mudzimba kuti vazvionere.
Mumiririri weInsiza muParamende, vaAndrew Langa, avo vari nhengo yeZanu (pf), vaiongorora zvaiitika izvi vakatsamwa zvikuru, iwo madzimai achingoimba zvawo vachiti zvikoro zvinotidhurira tose as vana vanofanirwa kuenda kuchikororo, nekudya. Madzimai aya ese akazoregerwa achienda apo muchuchisi akati kumapurisa havana mhosva. VaLanga vakazoonekwa vave kutuka madzimai aya vachinyadzisira, vachiratidza kusvotwa. – WOZA
Zvichatidhurira kutengesa nyika kumaChaina
HARARE – Hurumende yavaRobert Mugabe, iyo isisazivi zvekuita nekuparara kwaita hupfumi hwenyika kwakatanga muna1999, yapera kugovera zvicherwa zvenyika zvichiri muvhu kunyika dzakaita seChaina nedzimwe dzekumabvazuva, iyo ichingopiwa rubatsiro rwenguva shomanana.
Muchirongwa chayo chekurerekera kumabvazuva mushure mekupokana nenyika dzekumadokero pamusoro penyaya dzekutyora kodzero dzevanhu, hurumende yatonyorerana zvibvumirano zvinosvika gumi nechimwe nenyika dzakaita seChaina neIrani kuti dziitengesere mafuta, kana kuti dzibatsire kuchera zviwanikwa kana kukwenya magetsi nekufambisa dzinhare.
Svondo rakapera mutevedzeri wemutungamiri wenyika, amai Joyce Mujuru, vakatungamira nhumwa dzavaMugabe kunotengesa nyika, uko vakanonyorerana zvibvumirano zvekuti maChaina atore zvicherwa zveZimbabwe.
Vawongorori vanoti izvi hazvisiri kuzobatsira kuburitsa Zimbabwe mumatambudziko asi kutoti zvichaita kuti maChaina awane imwe nyika yekurasira zvigadzirwa zvayo izvo zvisingabatsiri Zimbabwe.
Nyanzvi yezvematongerwo enyika paYunivesiti yeZimbabwe VaJohn Makumbe vakati hupfumi hweZimbabwe hwakange husina kumira zvakanaka zvekuti ingatengeserana nemaChaina ikapona.
“Kuti titengeserane nemaChaina hunge hupfumi hwedu hwakatosimba chaizvo, kwete huri pasi pasi sezvahuri pari zvino,” vakadaro VaMakumbe.
Vakatizve chirongwa chekutarisa kumabvazuva chavaMugabe ndicho chiri kutobatsira kuuraya nyika nokuti chiri kuuraya makambani anga achigadzira zvinhu ayo ave kuvhara achiburitsa vanhu mabasa nokuda kwekuti vanhu vave kutenga zvigadzirwa zvekuChaina zvisingatani kufa.
Imwe shashawo yezvehupfumi hwenyika vaJames Jowa vakati izvi zvekuramba tichiita madhiri ekutengesa zvicherwa neminda zvichazonetsa kana nyika yazogadzikana, kana kuti zvichatotitadzisa kugadzikana.
“Ndinowona zvichisvika pekuti tichatotadza kudzosa hupfumi kuvanhu vatema munyika muno, uye zvichizokonzerawo kunetsana pakati pehurummende ichazotevera nenyika dzinenge dzanyorerana zvibvumirano nehurumende yavaMugabe,” yakatsinhira shasha iyi. – ZimOnline
Fambai zvakanaka Sekuru Sigogo
BULAWAYO – Sekuru Ndabezinhle Sigogo, avo vaiva nyanzvi yekunyora mururimi rwechiNdevere vakatisiya vave nemakore makumi manomwe nemana (74).
Pamakore makumi mana avainyora, vaSigogo vakatisiira hupfumi hwemabhuku enyaya gumi nemapfumbamwe uye evana, nemamwe enhetembo. VaElias Mari, veNational Arts Council vakati Sekuru Sigogo vaiva shasha yeshasha, uye vakange vakazvipira kubudiriro yezvekunyora mundimi dzamai.
Zvekuti vakafunda kusvika Ghiredhi 7 chete hazvina kumbovakanganisa.
Rimwe basa guru ravakaita raiva rekuturikira muzvinyorwa zvidzidzo nemhiko dzechiRoma kuisa muchiNdevere.
Vakasiya mudzimai, vana vanomwe nevazukuru gumi nevatatu. – NeMunyori Wedu.
“Pasina jambanja vaMugabe havatombopfakanyiki”
HARARE – Kudaidzira kuri kuitwa nebato rinopikisa kuti vaRobert Mugabe vabvume chirongwa chekudzika bumbiro remutemo idzva nekuita sarudzo hakusi kuzofa kwakatambirwa navaMugabe kusvika bato rinopikisa raratidza kuti kwaipa.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC VaMorgan Tsvangirai svondo rakapera vakaparura chirongwa chekuti Zimbabwe ibude mumatambudziko ezvematongerwo ayo nehupfumi hwayo – asi chirongwa ichi chaida kuti vaMugabe vatambire bumbiro idzva, vobva pachigaro pobva pazoitwa sarudzo inowongororwa nevekunze
Iyo MDC nemamwe masangano akamirira vanhu vaizoenda pakuratidzira kana vaMugabe vakaramba izvi, vakadaro VaTsvangirai.
Asi imwe nyanzvi yezvematongerwo enyika paYunivhesiti yeZimbabwe, vaJohn Makumbe vakati mutungamiri uyu, achemberera muchigaro haasi kuzomboteerera zvido zvavo kusvika vatoratidza nekuratidzira kwakasimba kuti vanogona kuita kuti vanhu vabude kuzoratidzira zvakasimba.
Vakati chero vakaratidzira vaMugabe vari kuramba vachiti vanoda zvekutaura nemutungamiri weUK vaTony Blair nevamwe vemuEurope, kwete naVaTsvangirai avo vavanoti chidzoyi chenyika dzekumavirira..
VaTsvangirai vakaburitsa pfungwa dzavo dzekuunza runyararo zvichisanganisira vanhu vari muZimbabwe nevari kunze, uye navaKoffi Annan, munyori mukuru wesangano repasi rose reUN uyo akatiwo anoda kuwona nyaya yeZimbabwe ichipera gore rino.
VaAnnan vanonzi vakati vaida kuzoita hurukuro navaMugabe dzekuti vasiye chigaro, Zimbabwe yobva yapihwa rubatsiro rwakawanda. Paizotauriranwawo nevimbiso yekuti vaMugabe havazosungwi nemhoswa dzakaparwa apo vanga vari mutungamiri wenyika.
Vawongorori vanoti VaAnnan ndivo vangatobatsira Zimbabwe nokuti vaMugabe vari kutya nyaya yekutongwa, nokudaro vangangoteerera vaAnnan vakabva pachigaro.
“VaMugabe vasvika pekuti havachatsukunudzwi nezvinotaurwa, asi kutoratidzwa simba rekuti mhomho dzevanhu dzingangobuda munyika yose dzichiratidzira,” akadaro mumwe muwongorori anonzi Takura Zhangazha. – ZimOnline